कथा १. एउटा बीउ, पृथ्वी, एउटा रुख, सूर्यको प्रकाश, चराहरू र मान्छे | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
आज म तिमीहरूको माझमा एउटा नयाँ शीर्षकको बारेमा सङ्गति गर्नेछु। यो शीर्षक के हो? यसको शीर्षक: “सबै थोकका लागि जीवनको स्रोत परमेश्‍वर नै हुनुहुन्छ” भन्ने हो। के यो शीर्षक अलिक ठूलो सुनिन्छ? के यो तिमीहरूको पहुँचभन्दा केही परको भएजस्तो लाग्छ? “सबै थोकका लागि जीवनको स्रोत परमेश्‍वर नै हुनुहुन्छ”—यो शीर्षक केही दूरको कुरा जस्तो सुनिन्छ, तर परमेश्‍वरलाई पछ्याउने सबैले यो कुरा बुझेको हुनुपर्दछ किनभने यो कुरा परमेश्‍वर सम्‍बन्धी प्रत्येक व्यक्तिको ज्ञान र परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट र आदर गर्ने तिनीहरूको क्षमतासँग अलग्याउन नसक्ने गरी जोडिएको हुन्छ। त्यसैले म यस विषयमा सङ्गति गर्दैछु। यो शीर्षकको बारेमा मानिसहरूसँग सामान्य, पूर्व जानकारी हुनसक्छ वा शायद मानिसहरू यसको बारेमा केही हदसम्म जानकार हुनसक्छन्। केही मानिसहरूको दिमागमा यो ज्ञान वा चेतनाको साथमा सामान्य वा सतही स्तरको बुझाइ रहेको हुनसक्छ। अरूले आफ्‍नो हृदयमा केही विशेष अनुभवहरू गरेका हुनसक्छन् जसले उनीहरूलाई यस विषयमा गहिरो, व्यक्तिगत विचार गर्न प्रेरित गरेको हुन्छ। तर यस्तो पूर्व ज्ञान, गहिरो वा सतही जस्तोसुकै भए तापनि एकतर्फी हुन्छ र पर्याप्त मात्रामा स्पष्ट हुँदैन। त्यसैले, सङ्गतिको लागि मैले यो शीर्षकको छनौट गरेको हुँ: तिमीहरूमा गहिरो र अझै स्पष्ट बुझाइको विकास गर्न सहयोग गर्न। यो शीर्षकको विषयमा तिमीहरूसँग सङ्गति गर्न म विशेष विधिको प्रयोग गर्नेछु, यस्तो विधि जसको प्रयोग हालसम्म भएको छैन, यस्तो विधि जुन तिमीहरूलाई अलि असामान्य वा असहज लाग्न सक्छ। मैले के भन्न खोजेको हो भनेर तिमीहरूले केही समयपछि थाहा पाउनेछौ। के तिमीहरूलाई कथा मनपर्छ? (हामीलाई मनपर्छ)। अब, यस्तो देखिन्छ कि कथा सुनाउने मेरो चयन राम्रो हो किनकी तिमीहरू सबैलाई कथा धेरै मन पर्छ। अब, सुरु गरौं। यो विषयमा तिमीहरूले कुनै टिपोट गर्नुपर्दैन। म तिमीहरूलाई शान्त हुन र व्यग्र नहुन आग्रह गर्दछु। आफ्‍नो वरिपरिको वातावरण वा मानिसहरूबाट आफू बहकिन्छु जस्तो लाग्छ भने तिमीहरूले आफ्नो आँखा बन्द गर्न सक्‍नेछौ। तिमीहरूलाई सुनाउन मसँग राम्रो कथा छ। यो कथा एउटा बीउ, पृथ्वी, एउटा रुख, सूर्यको प्रकाश, चराहरू र मान्छेको बारेमा हो। यसका मुख्य चरित्रहरू को हुन्? (एउटा बीउ, पृथ्वी, एउटा रुख, सूर्यको प्रकाश, चराहरू र मान्छे)। के यिनीहरूमध्ये कोही परमेश्‍वर हुनुहुन्छ? (होइन।) यति हुँदाहुँदै पनि, यो कथा सुनिसकेपछि तिमीहरू आनन्दित र सन्तुष्ट भएको अनुभव गर्नुहुनेछ भन्नेमा म ढुक्क छु। अब, कृपया शान्त भएर सुन्नु होला।
एउटा सानो बीउ पृथ्वीमा खस्यो। ठूलो पानी पर्‍यो, र बीउबाट एउटा कोमल टुसा पलायो अनि यसका जरा बिस्तारै तलको माटोभित्र छिर्‍यो। समयसँगै, निर्दयी हावा र कठोर वर्षा झेल्दै, जूनको आकार बिस्तारै घट्ने, बढ्ने क्रमसँगै परिवर्तन भएका ऋतुहरूलाई हेर्दै टुसा हुर्कियो। ग्रीष्म याममा, टुसाले यस ऋतुको प्रखर रापलाई झेल्न सकोस् भनेर पृथ्वीले पानीको उपहार ल्याइदियो। र पृथ्वीकै कारण, टुसा गर्मीले आत्तिएन, र यसरी ग्रीष्म यामको कहाली लाग्दो गर्मी टर्‍यो। जब हिउँद आयो, पृथ्वीले टुसालाई आफ्नो न्यानो अङ्गालोमा बाँध्यो, र पृथ्वी र टुसाले एक-अर्कालाई बलियो गरेर पक्रिए। पृथ्वीले टुसालाई न्यानो बनाई राख्यो, त्यसैले हिउँदको कठोर जाडोमा पनि टुसा बाँच्न सफल भयो; टुसालाई हिउँदको चिसो बतास र हिम-आँधीले कुनै क्षति पुर्‍याएन। पृथ्वीमा आश्रित टुसा हुर्किएर साहसी र खुशी भयो; पृथ्वीको निःस्वार्थ पोषणले गर्दा हुर्केर स्वस्थ र बलियो भयो। खुशीसाथ यो हुर्कियो, वर्षामा गाउँदै, बतासमा झुल्दै र नाच्दै। टुसा र पृथ्वी एक-अर्कामा निर्भर हुन्छन् …
वर्षहरू बिते, र टुसा हुर्किएर एउटा अग्लो रुख बन्यो। यो असङ्ख्य पातहरू भएका बलिया हाँगासहित पृथ्वीमाथि बलियो भएर उभियो। रुखका जराहरू पहिलेको जस्तै अझै पनि पृथ्वीको मुनि नै गाडिएका थिए, र अहिले यी जराहरू माटोको निकै तलसम्म पुगेका थिए। कुनै ताका सानो टुसा जोगाएको पृथ्वी अहिले महान रुखको आधार भएको थियो।
सूर्यको एउटा किरण रुखमा परेर टल्कियो। रुखले आफ्नो शरीर हल्लायो र परसम्म फैलिने गरी आफ्ना हात फैलायो र सूर्यको प्रकाशले उज्यालो बनाएको हावामा गहिरो सास फेर्‍यो। सोही समयमा रुखभन्दा तलको भुइँले पनि सास फेर्‍यो र पृथ्वीले ताजा भएको अनुभव गर्‍यो। त्यही बेला, हाँगाबाट हुँदै एउटा बतास बग्यो, र रुख ऊर्जाको लहर पैदा गर्दै आनन्द भावमा हल्लियो। रुख र सूर्यको प्रकाश एक-आपसमा निर्भर हुन्छन् …
मान्छेहरू रुखको शीतल छहारीमा बसे र फुर्तिलो, सुगन्धमय हावाको आनन्द उठाए। हावाले उनीहरूको मुटु र फोक्सोलाई सफा बनायो, र उनीहरूभित्र रहेको रगतलाई सफा बनायो, र उनीहरूको शरीर अब सुस्त वा अवरुद्ध रहेन। मान्छे र रुख एक-आपसमा निर्भर हुन्छन् …
चिरबिर गर्ने स-साना चराहरूको एउटा झुण्ड रुखको हाँगाहरूमा आएर बसे। शायद, उनीहरू त्यहाँ कुनै परभक्षीबाट जोगिन वा उनीहरूको बच्चा जन्माउन र हुर्काउन आएका थिए, वा शायद उनीहरू त्यहाँ केही समयका लागि विश्राम लिन मात्रै आएका थिए। चरा र रुख एक-अपासमा निर्भर हुन्छन् …
रुखका जराहरू, बाङ्गिदै र बटारिँदै, पृथ्वीको तलसम्म गाडिए। यसको मूल काण्डद्वारा यसले पृथ्वीलाई हावा र वर्षाबाट आश्रय दियो, र यसको फैलिएको जराहरूले रुखको फेदमुनि रहेको पृथ्वीको रक्षा गर्‍यो। पृथ्वी रुखको आमा भएकाले रुखले यसो गरेको हो। उनीहरूले एक-अर्कालाई सुदृढ बनाए र एक-आपसमा निर्भर रहे, र उनीहरू कहिल्यै छुट्टिने छैनन् …
र यसरी, यो कथाको अन्त्य हुन्छ। मैले सुनाएको कथा एउटा बीउ, पृथ्वी, एउटा रुख, सूर्यको प्रकाश, चराहरू र मान्छेको बारेमा थियो। यसमा थोरै मात्र दृश्यहरू थिए। यो कथाले तिमीहरूमा कस्तो छाप छोड्यो? मैले यसो भनिरहँदा, के तिमीहरूले मैले भनेको कुरा बुझ्यौ? (हामीले बुझ्यौं।) कृपया, आफ्ना भावनाका बारेमा कुरा गर। यो कथा सुनेर तँलाई कस्तो अनुभव भयो? योभन्दा अघि मैले भन्नुपर्छ कि कथामा भएका सबै चरित्रहरूलाई छुन वा हेर्न सकिन्छ, उनीहरू वास्तविक वस्तु हुन्, कुनै अलङ्कार होइनन्। मेरो कथाभित्र कुनै पनि गुप्त विषय छैन, र यस कथाका मुख्य बुँदाहरूलाई कथाका केही वाक्यद्वारा नै व्यक्त गर्न सकिन्छ। (हामीले सुनेको कथाले एउटा सुन्दर चित्र कोर्दछ: एउटा बीउले टुसा हाल्छ र हुर्किएसँगै यसले वर्षका चारवटा ऋतुहरूको अनुभव गर्छ: वसन्त, ग्रीष्म, शरद र हिउँद। कुनै आमाको जस्तै गरी पृथ्वीले टुसा हाल्दै गरेको बीउको पालनपोषण गर्दछ। टुसाले चिसो कटाउन सकोस् भनेर यसले टुसालाई हिउँदमा न्यानो बनाउँछ। टुसा हुर्किएर रुख भएपछि, सूर्यको एउटा किरणले यसको हाँगामा छुन्छ जसले अत्यन्तै हर्ष ल्याउँछ। परमेश्‍वरका सिर्जनाहरूको प्रचुरतामा, म पृथ्वीलाई पनि जीवन्त देख्दछु, र पृथ्वी र रुख एक-अर्कामा निर्भर छन्। म सूर्यको किरणले रुखलाई दिने उत्कृष्ट न्यानोपन पनि देख्छु, र सामान्य प्राणी भए पनि चराहरू रुख र मान्छेहरूसँगै सहिष्णुताको एउटा सिद्ध चित्रमा सँगै आएको म देख्छु। मैले यो कथा सुनेपछि मेरो मनमा आएका भावनाहरू यीनै हुन्; यी सबै कुराहरू वास्तवमा जीवित नै छन् भन्‍ने म अनुभव गर्दछु। (धेरै राम्ररी भन्नुभयो। के अरू कसैलाई केही कुरा थप्न मन छ?) (यो बीउ उम्रने र अग्लो रुखमा हुर्किने कथामा, म परमेश्‍वरको सिर्जनाको चमत्कार देख्छु। परमेश्‍वरले सबै कुराहरू एक-अर्कालाई सुदृढ बनाउने र एक-अर्कामा निर्भर रहने गरी बनाउनुभएको छ र सबै कुराहरू जोडिएका छन् र एक-अर्कालाई सेवा गर्छन् भन्ने कुरा देख्छु। म परमेश्‍वरको बुद्धि, उहाँको चमत्कारलाई देख्‍छु र उहाँ सबै कुराका जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ भन्‍ने देख्छु।)
मैले भर्खरै गरेका सबै कुराहरू तिमीहरूले पहिले नै देख्नुभएका कुराहरू हुन्। उदाहरणका लागि, बीउहरू हुर्केर रुख बन्छन्, र यो प्रक्रियाको प्रत्येक विवरण तैँले देख्न नसके पनि, यही हुन्छ भनेर तँलाई थाहा हुन्छ, होइन त? तँलाई पृथ्वी र सूर्यको प्रकाशका बारेमा पनि थाहा छ। कुनै पनि रुखमा बसेका चराहरूको दृश्य सबैले देखेको छ, होइन र? र रुखको छहारीमा मानिसहरू बसेर शीतल तापेको दृश्य—तिमीहरू सबैले देखेको दृश्य हो, होइन? (हो।) तसर्थ, यी सबै कुराहरू एउटै चित्रको रूपमा प्रस्तुत हुँदा, उक्त चित्रले कस्तो भावनाको सिर्जना गर्दछ? (सहिष्णुताको भावना)। यस्तो कुनै चित्रमा भएका प्रत्येक कुराहरू के परमेश्‍वरबाट नै आएका हुन्? (हो। ) यी चिजहरू परमेश्‍वरबाट आएका हुनाले, यी विभिन्न कुराहरूको सांसारिक अस्तित्वको मूल्य र महत्त्व परमेश्‍वरलाई थाहा छ। जब परमेश्‍वरले यी सबै कुराहरूको सिर्जना गर्नुभयो, जब प्रत्येक कुराको योजना र सिर्जना गर्नुभयो, उहाँले उद्देश्यका साथ गर्नुभयो; र जब उहाँले यी कुराहरूको सिर्जना गर्नुभयो, प्रत्येकमा जीवन भरिएको थियो। मानवजातिको अस्तित्वका लागि उहाँले सिर्जना गर्नुभएको वातावरणमा, हाम्रो कथामा व्याख्या गरिएजस्तै, एउटा बीउ र पृथ्वी एक-अर्कामा निर्भर हुन्छन्, जहाँ पृथ्वीले बीउलाई पोषण प्रदान गर्दछ र बीउहरू पृथ्वीसँग जोडिएको हुन्छ। यो सम्बन्ध परमेश्‍वरले गर्नुभएको सृष्टिको सुरुवातमा उहाँबाट आज्ञा भएको हो। रुख, सूर्यको प्रकाश, चराहरू र मान्छेहरू मानवजातिका लागि परमेश्‍वरले सिर्जना गर्नुभएको जीवन्त वातावरणको एक चित्रण हो। पहिलो कुरा, रुखले पृथ्वी छोड्न सक्दैन न सूर्यको प्रकाशविना यो बाँच्न नै सक्छ। त्यसो भए, रुखको सिर्जना गर्नुको प्रभुको उद्देश्य के थियो त? के यो पृथ्वीको लागि मात्रै थियो भनेर हामी भन्न सक्छौं? के यो चराहरूको लागि मात्रै थियो भनेर हामी भन्न सक्छौं? के यो मान्छेहरूका लागि मात्रै थियो भनेर हामी भन्न सक्छौं? (सक्दैनौं।) यिनीहरू बीचको सम्बन्ध के हो? उनीहरू बीचको सम्बन्ध परस्पर सुदृढ बनाउने, अन्तरनिर्भरता तथा अविभाज्य छ। यसको अर्थ, पृथ्वी, रुख, सूर्यको किरण, चराहरू तथा मान्छेहरू अस्तित्व तथा पालन पोषणका लागि एक-अर्कामा निर्भर रहेका हुन्छन्। रुखले पृथ्वीको रक्षा गर्दछ, र पृथ्वीले रुखको पालन पोषण गर्दछ; सूर्यको किरणले रुखलाई पोषण प्रदान गर्दछ भने रुखले सूर्यको किरणबाट ताजा हावा लिन्छ र सूर्यबाट पृथ्वीमा पर्ने प्रचण्ड गर्मीलाई कम गर्दछ। यसबाट अन्त्यमा कसले लाभ लिन्छ? मानवजातिले, होइन त? यो मानवजाति जिउने, अर्थात् परमेश्‍वरले सिर्जना गर्नुभएको वातावरणसँग अन्तर्निहित रहेका सिद्धान्तहरूमध्येको एक हो; प्रारम्भदेखि प्रभुले राख्नुभएको अभिप्राय पनि यही नै हो। यो चित्र सामान्य देखिए तापनि, हामीले यसभित्र परमेश्‍वरको बुद्धि तथा अभिप्रायलाई देख्न सक्छौं। मानवजाति पृथ्वी वा रूखहरूविना बाँच्न सक्दैन, र चराहरू र सूर्यको प्रकाशविना बाँच्‍न त एकदमै गाह्रो पर्दछ। होइन त? यो एउटा कथा मात्रै भए तापनि, स्वर्ग र पृथ्वी र सबै थोक र मानवजाति बाँच्न सक्ने वातावरणको रूपमा रहेको उहाँको उपहारको सूक्ष्म रूपलाई यसले चित्रण गर्दछ।
परमेश्‍वरले मानिसका लागि स्वर्ग र पृथ्वी अनि सबै थोकका साथै बसोबासका लागि वातावरणको सिर्जना गर्नुभयो। पहिलो कुरा, हाम्रो कथाको मुख्य बुँदाले एक-अर्कालाई सुदृढ बनाउने, अन्तर-निर्भरता र सबै कुराहरूको सह-अस्तित्वको बारेमा सम्बोधन गर्‍यो। यो सिद्धान्तमा, मानवजातिको अस्तित्व रहेको वातावरणको रक्षा भएको हुन्छ; यो अस्तित्वमा रहन सक्छ र दिगो हुनसक्छ। यसकारणले गर्दा, मानवजातिले प्रगति तथा प्रजनन गर्न सक्छन्। हामीले देखेको चित्र एउटा रुख, पृथ्वी, सूर्यको प्रकाश, चराहरू र मान्छे सँगसँगै भएको चित्र हो। के यो चित्रमा परमेश्‍वर हुनुहुन्छ? त्यहाँ कसैले पनि परमेश्‍वरलाई देखेन, होइन? तर, दृश्यमा भएका चिजहरू बीचको एक-अर्कालाई सुदृढ बनाउने र अन्तर-निर्भरताको नियम देखियो, यो नियममा परमेश्‍वरको अस्तित्व र सार्वभौमिकता देखियो। परमेश्‍वरले सबै कुराहरूको जीवन तथा अस्तित्व जोगाउनका लागि यस्तो सिद्धान्त तथा यस्तो नियमको प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसरी, उहाँले सबै कुरा तथा मानवजातिको हेरचाह गर्नुहुन्छ। के यो कथा हाम्रो मुख्य विषयसँग सम्बन्धित छ? सतहमा यो सम्बन्धित नभएको जस्तो देखिन्छ, तर वास्तविकतामा, जुन नियमअनुसार परमेश्‍वरले सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुभयो र सबै कुराहरूमा उहाँको प्रभुत्व छ, ती सबै नै सबै कुराको जीवनको स्रोत उहाँमा नै छ भन्‍ने कुरामा घनिष्ट रूपमा जोडिएको छ। अब, तिमीहरूले केही कुरा सिक्न सुरु गर्दैछौ!
परमेश्‍वरले सबै कुरा सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई शासन गर्ने नियमहरूको विषयमा आज्ञा दिनुहुन्छ; उहाँले सबै कुराहरूको अस्तित्वलाई शासन गर्ने नियमहरूको विषयमा आज्ञा दिनुहुन्छ; उहाँले सबै कुराहरू नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, र ती कुराहरूलाई झनै बलियो हुने र आपसमा निर्भर हुने गरी निर्धारण गर्नुहुन्छ, ताकि तिनीहरू नष्ट नहोऊन् वा नहराऊन्। यसरी मात्रै मानवजाति बाँचिरहन सक्दछन्; यसरी मात्रै तिनीहरू यस्तो वातावरणमा परमेश्‍वरको निर्देशनमा बाँचिरहन सक्छन्। परमेश्‍वर यी सबै कुराहरू सञ्चालन गर्ने नियमहरूको मालिक हुनुहुन्छ, र कसैले पनि यी नियमहरूमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन्, न त यी नियमहरूलाई परिवर्तन नै गर्न सक्छन्। यी नियमहरू परमेश्‍वरलाई मात्रै थाहा छ, र परमेश्‍वरले मात्रै यी नियमहरूको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। रूखहरू कहिले उम्रिन्छन्; वर्षा कहिले हुन्छ; पृथ्वीले रूख-बिरुवाहरूलाई कति पानी र कति पोषक तत्त्वहरू दिन्छन्; कुन ऋतुमा पातहरू झर्नेछन्; रूखहरूले कुन ऋतुमा फल दिन्छन्; सूर्यको किरणले रूखहरूलाई कति पोषण दिन्छन्; सूर्यको किरण पाइसकेपछि रूखहरूले सासको रूपमा के छोड्छन्—यी सबै कुराहरू परमेश्‍वरले सबै कुराको सृष्टि गर्दा कसैले पनि तोड्न नसक्ने नियमको रूपमा पूर्वनिर्धारित गर्नुभएको हो। परमेश्‍वरले सृष्टि गर्नुभएको ती सबै कुराहरू जीवित भए पनि, वा मानिसका आँखामा, निर्जीव भए पनि, उहाँको हातमा छन्, उहाँले तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र तिनीहरूमाथि शासन गर्नुहुन्छ। कसैले पनि यी नियमहरू परिवर्तन गर्न वा तोड्न सक्दैन। यसो भन्नुको अर्थ, जब परमेश्‍वरले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो, तब उहाँले पृथ्वीविना रूखले जरा हाल्न, उम्रन र बढ्न सक्दैन; र यदि पृथ्वीमा कुनै रूखहरू छैन भने पृथ्वी सुक्खा हुन्छ; रूख चराहरूका लागि घर र हावाबाट आश्रय लिन सक्ने ठाउँ हुनुपर्छ भन्‍ने कुरा पूर्वनिर्धारित गर्नुभयो। के सूर्यको किरणविना रूख बाँच्न सक्छ? (सक्दैन।) न त यो पृथ्वी आफैमा मात्रैमा बाँच्न सक्दछ। यी सबै चिजहरू मानिसजातिका लागि हो, मानवजातिको अस्तित्वका लागि हो। रूखबाट, मानिसले ताजा हावा प्राप्त गर्दछ, र मानिस पृथ्वीमा बस्दछ, जसलाई रूखले सुरक्षित राखेको हुन्छ। मानिस सूर्यको किरण वा विभिन्न जीवित प्राणीहरूविना बाँच्न सक्दैन। यी सम्बन्धहरू जटिल भए तापनि, सबै चीजहरूले एक-अर्कालाई झनै सुदृढ बनाउन सकून्, एक-आपसमा निर्भर रहन सकून् र सह-अस्तित्व कायम रहन सकोस् भन्ने हेतुले यी सबै चीजहरूमाथि शासन गर्ने नियम परमेश्‍वरले बनाउनुभएको हो भन्ने कुरा तैँले याद राख्नुपर्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, उहाँले सृष्टि गर्नुभएको प्रत्येक चीजको आ-आफ्नै मूल्य र महत्त्व छ। यदि परमेश्‍वरले कुनै महत्त्वहीन चीजको सृष्टि गर्नुभयो भने, परमेश्‍वरले उक्त चीजलाई लुप्त बनाइदिनुहुनेछ। परमेश्‍वरले सबै चीजहरूका लागि व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू मध्येको एक यही हो। यस कथामा “व्यवस्थापन गर्नु” शब्दावलीले ले के बुझाउँछ? के परमेश्‍वरले रूखलाई प्रत्येक दिन पानी हाल्नुहुन्छ? के रूखलाई सास फेर्न परमेश्‍वरको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ? (पर्दैन।) “व्यवस्थापन गर्नु” ले यहाँ सृष्टिपछि सबै चीजहरूको लागि परमेश्‍वरको व्यवस्थापनलाई बुझाउँछ; सबै चीजहरूलाई शासन गर्ने नियमहरूको स्थापना गरेपछि परमेश्‍वरले ती चीजहरूको व्यवस्थापन गर्नु मात्रै पनि पर्याप्त हुन्छ। पृथ्वीमा बीउ रोपेपछि, रूख आफैँ बढ्छ। यसको वृद्धिका सर्तहरू सबै परमेश्‍वरले तर्जुमा गर्नुभएको हो। परमेश्‍वरले घाम, पानी, माटो, हावा र वरिपरिको वातावरण बनाउनुभयो; परमेश्‍वरले हावा, शीत, हिउँ र वर्षा र चार वटा ऋतुहरू बनाउनुभयो। यी सबै कुराहरू रूख हुर्कनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वसर्तहरू हुन्, र यी चीजहरूलाई परमेश्‍वरले नै तयार पार्नुभएको थियो। त्यसैले, के परमेश्‍वर यस जीवित वातावरणको स्रोत हुनुहुन्छ? (हो, हुनुहुन्छ।) के परमेश्‍वरले प्रत्येक दिन रूखहरूको प्रत्येक पातको गणना गर्नुपर्दछ? पर्दैन! न त परमेश्‍वरले रूखलाई सास फेर्न सहयोग गरिरहनु पर्दछ वा न त “अब रूखहरूमा चम्किने समय भयो” भन्दै दिनहुँ सूर्यको किरणलाई जगाउनु नै आवश्यक रहन्छ। उहाँले त्यसो गरिराख्‍नु पर्दैन। उक्त नियमअनुसार, चम्किने समय भएपछि सूर्य आफै चम्कन्छ; यो देखा पर्दछ र रूखमा टल्कन्छ र रूखले आवश्यक पर्दा सूर्यको प्रकाश ग्रहण गर्दछ, र आवश्यक नपर्दा, रूख उक्त नियमभित्रै रहेर बाँचिरहेको हुन्छ। तिमीहरू यस प्रक्रियालाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्न सक्षम नहुन पनि सक्छौ, तथापि यो एउटा तथ्य हो, जसलाई जो-कसैले देख्न र स्वीकार गर्न सक्दछन्। तैँले गर्नुपर्ने कार्य भनेको सबै चीजहरूको अस्तित्वलाई शासन गर्ने नियमहरू परमेश्‍वरबाट आउँछन् भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नु, र परमेश्‍वरको प्रभुत्व सबै कुराको विकास र अस्तित्वमाथि रहन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु हो।
अब, के यो कथामा मानिसहरूले “अलङ्कार” को रूपमा चिन्ने पक्षलाई समेटिएको छ? के यो व्यक्तित्वकरण हो? (होइन।) मैले एउटा सत्य कथा सुनाएँ। जीवन भएका, सबै किसिमका जीवित प्राणीहरूमाथि परमेश्‍वरले शासन गर्नुहुन्छ; प्रत्येक जीवित प्राणीको सृष्टि भएको समयमा, परमेश्‍वरले तिनमा जीवन भरिदिनुभयो; प्रत्येक जीवित प्राणीको जीवन परमेश्‍वरबाट आउँछ र यसलाई निर्देशित गर्ने बाटो र नियमलाई पछ्याउँदछ। यसको लागि मानिसले यसलाई परिवर्तन गरिरहनु पर्दैन, न त यसलाई मानिसको मद्दतको नै आवश्यकता पर्दछ; यो परमेश्‍वरको सबै चीजहरूको लागि प्रबन्ध गर्ने एउटा तरिका हो। तिमीहरूले बुझ्यौ, होइन त? के मानिसले यस विषयको पहिचान गर्नु आवश्यक छ भन्ने तिमीहरूलाई लाग्छ? (हो।) त्यसैले, के जीवविज्ञानसँग यो कथाको कुनै सम्बन्ध छ? के यो ज्ञानको क्षेत्र वा सिकाइको उपखण्डसँग कुनै हिसाबले सम्बन्धित छ? हामी जीवविज्ञानको बारेमा छलफल गरिरहेका छैनौं, र हामी अवश्य नै कुनै पनि जैविक अनुसन्धान गरिरहेका छैनौं। हाम्रो कुराकानीको मुख्य विषय के हो? (सबै थोकका लागि जीवनको स्रोत परमेश्‍वर नै हुनुहुन्छ।) तिमीहरूले यस सृष्टिमा के देखेका छौ? के तैँले रूखहरू देखेको छस्? के तैँले पृथ्वी देखेको छस्? (छ।) तिमीहरूले सूर्यको किरण देखेका छौ, होइन त? के तिमीहरूले रूखमा चराहरू बसेको देखेका छौ? (हामीले देखेका छौँ।) के यस्तो वातावरणमा बाँच्न पाउँदा मानवजाति खुशी छ? (छ।) यसो भन्नुको अर्थ, मानवजातिको घर, उनीहरूको जीवनको वातावरण बनाउन र सुरक्षा गर्नको लागि परमेश्‍वरले—आफूले सृष्टि गर्नुभएको—सबै चीज प्रयोग गर्नुभयो। यस प्रकारले, परमेश्‍वरले मानवजाति र सबै कुराको लागि प्रबन्ध गर्नुहुन्छ।
यस कुराकानीको शैली, मैले गरिरहेको सङ्गतिको तरिका तिमीहरूलाई कस्तो लाग्‍यो? (यो बुझ्न सजिलो छ, र वास्तविक जीवनका धेरै उदाहरणहरू छन्।) मैले बोलेका यी शब्दहरू निरर्थक छैनन्, छन् त? सबै थोकका लागि जीवनको स्रोत परमेश्‍वर नै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नका लागि के मानिसहरूलाई यो कथाको आवश्यकता छ? (छ।) उसो भए, अब हामी अर्को कथातर्फ अघि बढौं। अर्को कथाको विषयवस्तु अलि फरक छ, र कथाको चुरो कुरा पनि अलि फरक छ। यस कथामा देखा पर्ने सबै कुरा परमेश्‍वरको सृष्टिमा मानिसले आफ्नै आँखाले देख्न सक्ने कुरा हुन्। अब, म मेरो अर्को कथा सुरु गर्छु। कृपया शान्त भएर सुन्नु होला र मेरा कुराको अर्थ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न, विचार गर्नुहोला। कथापछि, तिमीहरूले के-कति सिक्यौ भनेर बुझ्नका लागि म तिमीहरूलाई केही प्रश्नहरू सोध्‍नेछु। यस कथाका पात्रहरू ठूलो हिमाल, सानो नदी, ठूलो हावा र विशाल छाल हुन्।
अर्को: कथा २. ठूलो हिमाल, सानो नदी, ठूलो हावा र विशाल छाल